Iindaba -Umzekelo wesicelo se-SWMC yokugrumba isixhobo kwi-photovoltaic engineering
Umzekelo wesicelo se-SWMC yokugrumba isixhobo kwi-photovoltaic engineering
Ngenxa yokunqongophala kwamandla emveli, ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwamandla amatsha kutsale umdla wawo onke amazwe emhlabeni.Kwangelo xesha, amandla amatsha e-photovoltaic eTshayina akhula ngokukhawuleza, kwaye itekhnoloji iyakhula ngokuthe ngcembe, isondela okanye ifikelela inqanaba eliphambili emhlabeni. Ke ngoko, ilizwe libeka phambili isikhokelo sophuhliso, iinjongo zesicwangciso, imisebenzi ephambili kunye nemilinganiselo yomgaqo-nkqubo we-photovoltaic.
Iprojekthi yokuveliswa kwamandla kwe-photovoltaic, enezixhobo ezicwangcisiweyo ze-40MWP (MW), ikwisixeko saseWulanchabu, kwiNgingqi yaseMongolia ye-Autonomous Region, enokuphakama malunga neemitha ezili-1500-1520, ezikwimozulu yeli lizwekazi kunye nemozulu eyintlango Buchatshazelwe luxinzelelo lweMathafa aseMongolia, obona bushushu buphezulu ziidigri ezingama-36.5, obona bushushu bungaphantsi kweedigri ezingama-39, ubunzulu bomhlaba oqanduselweyo bungu-220cm, ubunzulu bekhephu buli-19cm, kwaye umndilili wonyaka imvula ngu-315.3mm.
Iziko loyilo ekugqibeleni ligqibe isikimu se-photovoltaic pile scheme ngolu hlobo lulandelayo: ukuvula i-150mm, ububanzi be-1.0-1.5m.
I-SWMC ibonelele ngeeyunithi ezisi-8 zoomatshini bokugrumba be-SWMC 370 ezifanelekileyo kulwakhiwo lwe-photovoltaic, iiyunithi ezi-5 zoomatshini bokugrumba be-SWMC abanamandla okunyuka, iiyunithi ezi-3 ze-SWMC D50 oomatshini bokugrumba abalungele intshukumo yomhlaba ethe tyaba ngokukhawuleza kwisiza se-photovoltaic, iiseti ezisixhenxe zeSULLAIR American 600RH kunye ne550RH izixhobo zomoya, iiseti ezi-4 zeFusheng Elman 630 zecompressor zomoya, kunye neeseti ezi-5 zeLiuzhou Fuda 180-19 zomoya.
I-SWMC 370, i-SWMC 360 kunye ne-SWMC D50 isebenzisa i-crawler ukuhamba, enendawo elungileyo yokuziqhelanisa, uzinzo kunye nokusebenza okuphezulu kokhuseleko.I-torque yokukhutshwa kwamandla kumatshini ojikelezayo mkhulu, onokugqitywa ngexesha elinye phantsi kweemeko zejoloji ezinje amatye e-cobblestoss kunye neefossil zomoya, ngaphandle kwesidingo sokugrumba okwesibini.
Sullar isiguquli somoya, isiguquli somoya seFushenger, isiguquli somoya seLiuzhou Fidelity, xa kusombiwa imbobo enkulu ukugcina uzinzo koxinzelelo, ukugcina isantya senkqubo yonke.
I-SwMC yokugrumba umatshini ine-winch yombane yokumba umngxunya wenqwaba ngothambeka oluphezulu, olugqibe umsebenzi walo onzima wokugqobhoza. ukubeka ecaleni, ukubeka indawo ngokukhawuleza kunye nokuchaneka, ukunqanda ukuchitha ixesha.
Ukubhola iigrigs I-SWMC 370, i-SWMC 360 kunye ne-SWMC D50 zixhotyiswe ngezixhobo zokuntywila emanzini xa kusombiwa amatye. Xa kusombiwa emhlabeni emva koko kufakelwe izixhobo zombhobho.
Ngee-RIGS ezili-16 zokuloba kwiprojekthi, umsebenzi wokugrumba ii-4 1MW square arrays (ewonke amaqela angama-800 anemingxunya engama-6,400) wagqitywa ngenyanga enye, eyaqinisekisa umgangatho weprojekthi kunye neshedyuli, kwaye akukho ngozi zokhuseleko ezenzekileyo ngexesha lokwakha. kwangaxeshanye, kudityaniswe neempawu zeprojekthi yesiza, ngokweemeko zalapha ekhaya zokuthatha amanyathelo ahlukeneyo okwakha, inkqubo yokwenziwa komngxunya igudile, ikulungile, emva kovavanyo lomntu wesithathu, zonke izikhombisi zovavanyo ziyahlangabezana neemfuno ezisemthethweni kunye noyilo, kwaye ufumene amava angcono okusombela, kunye nesibonelelo senkqubo yokwakha yeprojekthi yexesha elizayo.